Ma jeceshahay barafka ama barafka lagu ciyaaro oo ma leedahay Apple Watch Series 3? Hadda waxaad arki doontaa waxqabadkaaga saacadda | Wararka IPhone
Waana in Apple ay diyaar u tahay nooca 4.2 ee watchOS API-yada cusub ee u oggolaanaya dadka isticmaala inay duubaan macluumaadka la xiriira isboortiga barafka, barafka ama barafka. Waxaas oo dhami way ku xadidan yihiin dadka isticmaala Apple Watch Series 3 waana in sagxadda mitirka loo baahan yahay si loo soo qabto xogtan oo loo soo bandhigo dhammaan macluumaadkan ku saabsan ciyaartan, ku quudinta macluumaad dheeri ah codsiyada horeyba u heli jiray Apple Watch.
Runtu waxay tahay inay sii waddo inay nagu dhibto in Apple aysan heshiisyo la gaari karin hawl wadeenada Isbaanishka si ay ugu soo bandhigaan nooca LTE-ga dalkeenna, laakiin tani waa wax imaan kara muddo Hadda oo aan aragnay fursadaha yar ee aan haysanno waa inaan bilowno laga bilaabo maanta illaa berri, waxa ugu fiican ayaa ah ku raaxayso alaabta aan hadda iibsan karno oo Taxanahan 3 waa la heli karaa.
Haddii aad sidoo kale tahay qof jecel isboortiga jiilaalka, markaa waxaad mar hore haysataa cudurdaar kale oo aad ku iibsato. API-ka horeyba ugu shaqeynayay watchOS 4.2 wuu ogolaanayaa codsiyada rasmiga ah waxay ku daraan xogtaan xiisaha leh ee koritaanka, abtirsiinta iyo tababarada kale ee lagu qabto barafka. Altimitirku wuxuu leeyahay shaqooyin ka badan inta isticmaaleyaal badani u maleeyeen markay arkeen in laga hirgaliyay Apple Watch-ka cusub, hadda waxaan arki doonaa ilaa iyo inta ay howlahoodu socdaan.
Lahaansho Apple ku dar faahfaahinta ah waxqabadka karti u leh ururinta saacadda astaanta:
Wadarta fogaanta jiifka iyo toosan
Tirada dhaadheer ee la sameeyay, xawaaraha ugu badan iyo celceliska
Wadarta waqtiga dhaafay marka lagu daro kalooriyada lagu gubay waxqabad
Oo intaas ka sokow way yimaadaan caqabado cusub oo leh fargallada waxqabadka ee la xiriira isboortigan barafka, jimicsiyadaada dhaqdhaqaaqa oo waxaad la tartami kartaa kuwa kale ee daawadayaasha ah mahadnaqa waxqabadka la wadaago, oo aan maanta ku sameyn karno siddooyin jimicsi oo hadda socda. Codsiyada sida xaqiiqada ah uga faa'iideysan doona xogtan waxay horeyba ugu jireen dukaanka maanta, laakiin shaki la'aan waxay ku sii wanaajin doonaan: Jidadka, Snoww (labadan ugu horreysa ee la jaan qaadaya Siri la jaan qaadaya), Squaw Alpine, Snocru iyo Ski Tracks.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Ma jeceshahay barafka ama barafka barafka oo ma leedahay Apple Watch Series 3? Hadda waxaad arki doontaa waxqabadkaaga saacadda
WhatsApp waa la cusbooneysiiyay oo wuxuu sii wadaa inuu qaato howlaha Instagram